Imbali ye-1850 yekhaya lakudala kufutshane neHocking Hills
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe ongu1st Choice Cabin Rentals
U1st Choice Cabin Rentals unezimvo eziyi-812 zezinye iindawo.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike u1st Choice Cabin Rentals iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-1850 Inn yimbali ye-150 yeminyaka ubudala yokurenta ekwibhloko esuka kwiSithili soBugcisa seMbali yaseNelsonville. Eli khaya leholide lilungele iindwendwe ezindwendwela indawo yaseHocking Hills okanye iindwendwe ezindwendwela abafundi kwiKholeji yaseHocking okanye kwiYunivesithi yaseOhio. Le manor inamagumbi okuhlala amabini, igumbi lokutyela, ikhitshi eligcweleyo, amagumbi okulala ama-3 kunye neebhafu ezi-2.5. Eli khaya liyimbali libuyiselwe kakuhle imigangatho yokhuni oluqinileyo kunye ne-tiger oak yasekuqaleni ye-oki yomthi kwikhaya lonke.
Thatha imizuzu engama-30 yokuqhuba ukusuka kwikhaya lakho leeholide ukutyelela umqolomba waMadoda, iCedar Falls, iAsh Cave, iRock House, iConkle's Hollow, okanye iRock Bridge ekwiHocking Hills State Park. Nokuba liliphi ixesha lonyaka, wena kunye neendwendwe zakho aniyi kuphoxeka xa nindwendwela bonke ubuhle beHocking Hills!
IFranklin ibekwe eNelsonville kunye neekhilomitha ezi-5 ukusuka eWayne National Forest. Ipaki yeState ibonelela ngaphaya kwamawaka eehektare zokuphonononga ngokunyuka intaba, ukukhwela inqwelo mafutha, ukukhwela intaba, okanye ukukhwela ihashe. Xa zisedolophini, iindwendwe ziya kufuna ukutyelela iSithili saseNelsonville seMbali yobuGcisa beSikwele, i-Opera House yaseStuart, iHocking Valley Scenic Railway, okanye uMnyhadala woMculo waseNelsonville obanjwa minyaka le eHocking College. Iikhilomitha ezili-15 ukusuka kwikhabhinethi, iindwendwe ziya kubaleka kwiLake Hope State Park ekwihlathi laseZaleski State. Iindwendwe zingonwabela ukutya okumnandi eLake Hope Lodge okanye usuku lwepiknikhi kunye nokuqubha nosapho kunye nabahlobo.
Emazantsi-mpuma eOhio kukho into enokwenziwa ngumntu wonke! Abakhweli bebhayisikile banokukhwela ukusuka eNelsonville ukuya eAthene ecaleni kwendlela yebhayisekile yaseAdena ecaleni koMlambo iHocking; Abathandi be-ATV banokungena kwi-Wayne National Forest kumakhulu eendlela zokuhamba; Abazali kunye nabafundi be-alumni banokundwendwela iYunivesithi yaseOhio; kunye nabachwephesha bethu bendalo KUFUNEKA bandwendwele i-Old Man's Cave, iConkle's Hollow kunye neRock House ebekwe kwiHocking Hills entle, ebizwa ngokuba yenye yeBuzzFeed's Stunning Under-the-Radar Destinations to Add to Your Bucket List. Sijonge phambili kukuhlala kwakho kwenye yezindlu zethu zeholide ezirentwayo apha eHocking Hills, eOhio.
Umbuki zindwendwe ngu- 1st Choice Cabin Rentals
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nelsonville